TRF na Press 2020 - wardhụnanya ,hụnanya, Mmekọahụ & Ntanetị
Home TRF na Press 2020
Ndi oru nta akuko achotala Reward Foundation. Ha na-agbasa okwu banyere ọrụ anyị gụnyere: nkuzi anyị gbasara ihe egwu dị na binging ogologo oge na porn; oku maka inweta mmuta, ụbụrụ gbadoro ụkwụ na ụlọ akwụkwọ niile; mkpa maka ọzụzụ nke ndị nlekọta ahụike NHS na-akpali agụụ mmekọahụ na onyinye anyị research na mmekorita nwoke na nwanyi na ndi mmadu na-enwe mmekorita nke nwoke na nwanyi. Peeji a na-edepụta ọdịdị anyị na akwụkwọ akụkọ na ịntanetị. Anyị nwere olile anya izipu ọtụtụ akụkọ dịka 2020 na-aga n’ihu.
Ọ bụrụ na ịhụ akụkọ na-egosi TRF anyị etinyebeghị, biko zitere anyị a dee gbasara ya. You nwere ike iji ụdị kọntaktị na ala nke ibe a.
Kpọọ maka akwụkwụ ụgwọ kaadị akwụmụgwọ saịtị saịtị porn
Site Megha Mohan, okike na onye mmekorita nwoke na nwanyi na BBC News, Fraịdee 8 Mee 2020
Ndị isi ụlọ ọrụ kaadị kredit kwesịrị igbochi ịkwụ ụgwọ na saịtị ndị na-akpali agụụ mmekọahụ. Nke a bụ echiche otu ndị na-eme mkpọsa mba dị iche iche na otu ndị na-ekwu na ha na-arụ ọrụ iji gbochie mmegbu nke mmekọahụ.
Akwụkwọ ozi BBC hụrụ, nke ihe karịrị ndị na-akwado mkpọsa 10 na otu ndị na-eme mkpọsa bịanyere aka na ya, na-ekwu na saịtị ndị na-akpali agụụ mmekọahụ “na-ebibi ime ihe ike nke mmekọahụ, idina onye ikwu, na ịkpa ókè agbụrụ” ma na-enubata ihe ndị na-egosi imetọ ụmụaka na ịzụ ahịa mmekọahụ.
Otu onye na-eduga na saịtị, Pornhub, kwuru na "akwụkwọ ozi ahụ abụghị naanị na ọ bụ eziokwu na ọ dị njọ kamakwa ọ na-eduhie eduhie."
Mastercard gwara BBC na ha na-enyocha azịza emere n'akwụkwọ ozi ahụ na saịtị ndị na-akpali agụụ mmekọahụ ma "ga-akwụsị njikọ ha na netwọkụ anyị" ma ọ bụrụ na ekwenye na onye ọrụ kaadị eme ihe megidere iwu.
Nnukwu ụlọ ọrụ kaadị akwụmụgwọ iri
E zigara akwụkwọ ozi 10 ụlọ ọrụ kaadị kredit ahụ, gụnyere "Big Three", Visa, MasterCard na American Express. Ndị bịanyere aka n'akwụkwọ nkwado sitere na mba gụnyere UK, US, India, Uganda na Australia akpọọla oku ka ha kwụsị ịkwụ ụgwọ na saịtị ndị gba ọtọ.
Ndị bịanyere aka n'akwụkwọ ozi ahụ gụnyere ndị otu na-enweghị uru anaghị echekwa National Center on Sexual Exploitation (NCOSE) na US, yana ọtụtụ ndị okwukwe ndị ọzọ na-edu ma ọ bụ ndị otu na ụmụ nwanyị na-ahụ maka ikike ụmụ.
Akwụkwọ ozi ahụ na-ebo ebubo na ọ gaghị ekwe omume "ikpe ma ọ bụ nyochaa nkwenye na vidiyo ọ bụla na saịtị ha, ma hapụ vidiyo vidiyo kamera dị ndụ" nke "ebumpụta ụwa na-eme ka ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ebe nrụọrụ weebụ bụrụ ihe mgbaru ọsọ maka ndị na-azụ ahịa mmekọahụ, ndị na-emegbu ụmụaka, na ndị ọzọ na-ekerịta vidiyo ndị na-enweghị isi".
"Anyị na-ahụ mkpu ákwá ụwa na-arịwanye elu banyere nsogbu nke ikesa ebe nrụọrụ weebụ na-akpali agụụ mmekọahụ n'ọtụtụ ụzọ na ọnwa ndị na-adịbeghị anya," ka Haley McNamara, onye nduzi nke Centerlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Mmekọahụ nke UK na UK, mba ụwa nke NCOSE kwuru. na onye binyere aka n’akwụkwọ ozi ahụ.
"Anyị bụ ndị na-ahụ maka ụmụaka na mba ụwa na ndị na-emegbu nwoke na nwanyị na-achọ ụlọ ọrụ ego ka ha nyochaa ọrụ nkwado ha na ụlọ ọrụ ihe na-akpali agụụ mmekọahụ, na ka ha na ha kwụsị mmekọrịta," ka ọ gwara BBC.
E bipụtara akụkọ banyere agụụ maka vidiyo mmejọ ụmụaka na saịtị ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na Eprel site n'aka Protectionmụaka Nchedo Protectionmụaka nke India (ICPF). Nzukọ ahụ kwuru na enweela ịrị elu dị elu maka mmetọ ụmụaka na-enyocha India, ọkachasị ebe ọ bụ mkpọchi coronavirus.
Nyochaa ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'ịntanetị
Pornhub, ebe a na-enyochakarị ihe nkiri ndị gba ọtọ na-ewu ewu bụ aha ya na leta ahụ. Na 2019, ọ debara aha ihe karịrị nleta 42 ijeri, ihe ruru nde 115 na otu ụbọchị.
A na-enyocha Pornhub n'afọ gara aga mgbe otu n'ime ndị na-eweta ọdịnaya ya - Girls Do Porn - ghọrọ isiokwu nke nyocha FBI.
Ndị FBI boro mmadụ anọ na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ na-emepụta ihe mepụtara ụzọ nke ịrakọta ụmụ nwanyị ime fim nke ndị gba ọtọ n'okpuru ịgha ụgha. Pornhub wepụrụ ọwa ndị Girl Do Porn ozugbo enwere ebubo ndị ahụ.
Mgbe ọ na-agwa BBC okwu n'ọnwa Febụwarị maka okwu a, Pornhub kwuru na iwu ya bụ "wepu ọdịnaya na-enwetaghị ikike ozugbo emere ka anyị mata ya, nke bụ ihe anyị mere n'okwu a".
N’ọnwa Ọktọba n’afọ gara aga, nwoke Florida dị afọ iri atọ, Christopher Johnson gbara akwụkwọ n ’ikpe maka imetọ nwoke dị afọ 30. Edere vidiyo nke ebubo ebubo ahụ na Pornhub.
N'otu nkwupụta ahụ na BBC na February, Pornhub kwuru na iwu ya bụ "wepu ọdịnaya na-enwetaghị ikike ozugbo emere ka anyị mata ya, nke bụ kpọmkwem ihe anyị mere n'okwu a".
Internet Watch Foundation, otu ụlọ ọrụ UK na-ahụ maka nleba anya na mmekorita nke ịntanetị - ọkachasị nke ụmụaka - gosipụtara na BBC na ha achọpụtala oge 118 nke mmejọ ụmụaka na vidiyo ụmụaka na Pornhub n'etiti 2017 na 2019. Ahụ na-arụ ọrụ na mmekorita ya na ndi uwe ojii na ndi ochichi nile n’uwa iji gosiputa ihe megidere iwu.
Na nkwupụta ya na BBC, ọnụ na-ekwuchitere Pornhub kwuru na ha "nwere mkpebi siri ike ikpochapu na ịlụ ọgụ na ọdịnaya na iwu niile na-akwadoghị, gụnyere ndị anaghị ekwenye na ihe na-erughị afọ. Ntụpụta ọ bụla ma ọ bụghị na nke a ezighi ezi. ”
“Usoro ịhazi ọdịnaya anyị dị na mbụ nke ụlọ ọrụ ahụ, na-eji teknụzụ ndị na-eduga na usoro imeru ihe oke nke na-emepụta usoro zuru oke iji chọpụta ma kpochapụ ikpo okwu nke ọdịnaya ọ bụla na-akwadoghị.
Pornhub kwuru na ndị otu "ndị na-anwa ime ka ndị uwe ojii nwee mmekọahụ na omume - zigara akwụkwọ ozi ahụ - abụghị naanị eziokwu na-ezighi ezi kamakwa ha na-eduhie eduhie."
American Express enweela iwu zuru ụwa ọnụ ebe kemgbe 2000. Iwu ahụ na-ekwu na ọ machibidoro azụmahịa maka ọdịnaya dijitalụ okenye ebe a na-ewere ihe egwu dị oke elu, yana mmachi zuru oke na ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'ịntanetị. Na N'ajụjụ ọnụ Smartmoney webụsaịtị na 2011, onye na-ekwuchitere American Express n'oge ahụ kwuru na nke a bụ n'ihi oke esemokwu, yana nchekwa ọzọ na ọgụ megide ikiri ihe ụmụaka.
N'agbanyeghị nke ahụ, òtù ndị ahụ zipụkwara akwụkwọ ozi ndị ahụ na American Express, n'ihi na ha na-ekwu na a na-enyefe nhọrọ ịkwụ ụgwọ American Express na saịtị ndị na-akpali agụụ mmekọahụ - gụnyere nke ọkachamara na ọdịnaya afọ iri na ụma.
Onye na-ekwuchitere American Express gwara BBC na mgbe amụma ụwa niile ka kwụ ọtọ, American Express nwere onye na-anya ụgbọ elu ya na otu ụlọ ọrụ na-enye ohere ịkwụ ụgwọ ụfọdụ weebụsaịtị na-akpali agụụ mmekọahụ ma ọ bụrụ na akwụ ụgwọ ahụ n'ime US yana kaadị kaadị ndị ahịa US.
Companieslọ ọrụ kaadị akwụmụgwọ ndị ọzọ kachasị mkpa, gụnyere Visa na MasterCard, na-ekwe ka ma ndị na-ejide kaadị ma ọ bụ kaadị debit zụta ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'ịntanetị.
N’ozi ha zitere BBC, onye nkwuchiteọnụ Mastercard kwuru na ha “na-eme nyocha ugbu a maka ebubo a zoro ezo anyị n’akwụkwọ ozi.
“Otu netwọk anyị si arụ ọrụ bụ na ụlọ akụ jikọtara onye ahịa na netwọkụ anyị ịnabata ịkwụ ụgwọ kaadị.
“Ọ bụrụ na anyị gosipụta ọrụ megidere iwu ma ọ bụ mmebi nke iwu anyị (nke ndị ji kaadị)), anyị ga-arụkọ ọrụ na ụlọ akụ nke onye ahịa ahụ ka ọ weta ha nrube isi ma ọ bụ kwụsị njikọ ha na netwọkụ anyị.
"Nke a kwekọrọ n'otú anyị si rụọ ọrụ n'oge gara aga na ndị ọrụ mmanye iwu na otu dị iche iche dịka Nationallọ Ọrụ Mba na Mba maka ụmụaka Na-efu efu.
Companieslọ ọrụ ịkwụ ụgwọ ntanetị na ntanetị mere ụfọdụ mmemme iji wee gbanarị ndị ụlọ ọrụ ihe na-akpali agụụ mmekọahụ.
Na Nọvemba 2019, Paypal, ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ n'ịntanetị zuru ụwa ọnụ, kwupụtara na ọ gaghịzi akwado ịkwụ ụgwọ maka Pornhub ka amụma ha machibidoro ịkwado "ụfọdụ ihe ma ọ bụ ọrụ mmekọrịta nwoke na nwanyị".
Na blog na saịtị ha, Pornhub kwuru na ha "mebiri" site na mkpebi ahụ na nkwaghari ahụ ga-ahapụ ọtụtụ puku ụdị Pornhub na ndị na-eme ihe nkiri bụ ndị dabere na ndenye aha site na ọrụ ndị kachasị ụgwọ na-enweghị ịkwụ ụgwọ.
Onye na-eme ihe nkiri na-akpali agụụ mmekọahụ nke na-ekerịta ihe na Pornhub, ma jụọ ya ka onye na-amaghị aha ya, kwuru na ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ ga-emetụta ihe ọ na-akpata.
"N'eziokwu, ọ ga-abụ iti aru," ka o kwuru. “Ọ ga-ehichapụ ihe niile m na-akpata, amaghịkwa m otú e si akpata ego, karịchaa ugbu a.”
N'ịgbaso nrụgide dị elu maka ịza ajụjụ na saịtị ndị gba ọtọ, Senator Ben Sasse nke Nebraska zigara ndị ọrụ na-ahụ maka ikpe ziri ezi na US na March na-arịọ Attorney General William Barr ka ọ nyochaa Pornhub maka ebubo ịkwanye na mmeko nwoke na nrigbu.
N'otu ọnwa ahụ, ndị omebe iwu otu Canada nke itoolu degaara Prime Minister Justin Trudeau na-akpọ maka nyocha banyere MindGeek, ụlọ ọrụ nne na nna Pornhub, nke nwere isi ụlọ ọrụ ya na Montreal.
International Center na Mmekọ Mmekọahụ, UK,
National Center maka Mmekpa nwoke na nwanyị, US,
Mkpokọta mkpoko, Australia
European Network nke Migrant Women, Belgium
Okwu Mere Anụ Ahụ Bolivia, Bolivia
Media Health maka andmụaka na Ndị Ntorobịa, Denmark
Onye na - eme nyocha, Ireland
Ntanetị Africa maka Mgbochi na Mkpuchi Mmekpa ụmụaka na ileda ụmụaka, Liberia
Relọ Akwụghachi Regwọ, Scotland
Mmemme Mentorship ysmụ nwoke, Uganda